Araceae Factory, Suppliers - China Araceae Manufacturers
Kuparadzira Araceae: teerera kune mwero kuwedzera kweshizha chimiro uchichengetedza yakachena mvura yekupfapfaidza, kuitira kuti mashizha ave akachena uye akachena, kunze kwekunze.
Inotevera tembiricha yepamusoro uye humidity yakakwirira, yakaoma yechando kuomesa kunyatsodiridza, inogona kupfapfaidzwa kumativi, kuderedza yakaoma, kwete mubheseni mvura, yakaderera tembiricha nguva kuderedza nhamba kudiridza, kuchengetedza kugadzikana kwemidzi uye chirimwa dormancy.Do kwete kutevera kukura zvakanyanya, dzivisa kutsika kwakadzika uye hunyoro hwepamusoro, midzi yekudyara yakaipa uye rufu.
Succulent chirimwa Monstera var.bosigiana White Variegata
Tembiricha yakakodzera kukura kwemushenjere iri pakati pe18-28℃.Paunenge uchidyara, isu tinofanirwa kutarisisa kune shanduko yekushisa kwezvakatipoteredza.Mumwaka wekushisa kwakanyanya muzhizha, tinofanira kutora matanho ekutonhodza, sekuendesa kune imwe imba inotonhorera, kana kumwaya mvura pachirimwa kuti itonhodze. uye chengetedza tembiricha yemumba inopfuura 15 madhigirii celsius, kuti isangane nezvinodiwa zvayo munguva yechando.
Succulent chirimwa Philodendron Pink Princess
Philodendron pink Princess imhando yemhando dzakasiyana.philodendron pink princess ndeyekusiyana kwezvakasiyana.
Mashizha ayo achangokura ane tsvuku-tsvuku, kusiyanisa kwemarudzi akasiyana-siyana mashizha achaonekwa mamwe mapinki, machena machena mapechi.Uye pachava nemamwe mavara machena kana akacheneruka pamashizha.
Humidity management: kufanana nemhoteredzo yakaoma, kudiridza kwakakodzera kunogona kuva.Kuti ivhu rirambe rakanyorova, pfapfaidza zvirimwa nemvura uye zvitonhodze kana tembiricha yakwira, uchengete mhepo 60 kusvika 70 muzana.
Succulent chirimwa Syngonium Podophyllum
Ishizha - chirimwa chekutarisa.Muzambiringa usingaperi une tambo yakasimba, uye chirimwa chevakuru chinokwanisa kukwira.Zviri nyore kukura midzi yemhepo pa nodes ye stem, zvichiita kuti ikwanise kukwira.Zvimwe zviviri zvinosiyanisa kureba kwepetiole uye chimiro chemashizha semakumbo edhadha.
Pamusoro pemashizha kazhinji machena, kirimu, sirivha, pink uye yepepuru, nezvimwewo, uye kukwanisa kuderedza carbon dioxide yakanaka kwazvo.Iko kukwanisa kuchenesa mhepo inosvibisa yehupenyu ine mwero, kunyanya kubvisa formaldehyde;Blade guruva retention (kubvisa guruva) kugona kweavhareji.